Rahoviana ny zoma mainty 2019? -News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
FIAINANA: 2019-11-29 HITS: 50
Zoma Mainty - teny roa mitovy dika amin'ny fampitomboana am-barotra, ary mihamitombo hatrany hatrany ny hetsika 2019.
Ny zoma 29 novambra 2019 no atao ny zoma mainty amin'ity taona ity dia daty manandanja ho an'ny kalandrie mpihaza bargain ary amin'ity taona ity dia tonga amin'ny fotoana mety indrindra amin'ny andro karama.
Na manaraka fihenam-bidy lehibe amin'ny teknolojia farany toa ny telefaona ianao, vola amin'ny kaomandinao ASOS manaraka na ny tolotra tsara indrindra any ivelany hanaovana ny varotra Krismasy anao dia tsy hisy ny tsy fahampian'ny fifanarahana amin'ny zoma mainty 2019, miaraka amin'ity taona ity ho iray amin'ireo lehibe indrindra mbola.
Ary mendrika ny manomboka mikaroka ny zavatra tadiavinao, ary ohatrinona ny vola andoavanao izany.
Raha toa ny fivarotana iray andro monja ny fomban-drazana, amin'ity indray mitoraka ity dia efa natomboka tany amin'ny ankamaroan'ny magazay ny fifampiraharahana izay Black Friday, miaraka amin'ny tian'i Currys, John Lewis ary Amazon efa misy fihenam-bidy mahavariana.
Hanome fihenam-bidy gaga anao i Ningbo Joiwo Amin'ny Zoma Mainty.
Misaotra an'ireo mpanjifantsika noho ny fahatokisany sy ny fanohanan'ny orinasa nandritra ny taona maro, misaotra anao nampiasa ny telefaoninay manerana an'izao tontolo izao!
Telefaona vonjy maika sy fanararaotana eny amin'ny Campus